NJEHIE "ỌRỤ A RỊỌRỌ CHỌRỌ NKWADO" NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Iguzobe "Ihe a rịọrọ chọrọ nkwado" njehie na Windows 7
Mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla na onye ntụgharị okwu Windows 7 ma ọ bụ na-amalite ngwa (egwuregwu kọmputa), ozi nhie nwere ike ịpụta: "Ọrụ a rịọrọ chọrọ nkwado". Ọnọdụ a nwere ike ime ọbụna ma ọ bụrụ na onye ọrụ emepewo ngwanrọ ngwanrọ na ikike nke onye nchịkwa OS. Ka anyị malite ịgwọ nsogbu a.
Na Windows 7, e debere ụdị akụkọ abụọ. Otu n'ime ha bụ maka onye ọrụ nkịtị, nke abụọ nwekwara ikike kachasị elu. A na-akpọ akaụntụ a "Onye nchịkwa nchịkwa". Maka ọrụ nchekwa nke onye ọrụ novice, ụdị ndekọ abụọ dị na ala.
Nkewa nke ike a bu "peeped" na usoro dabere na teknenti di iche iche nke nwere "mgbọrọgwụ" - "Superuser" (na onodu ya na ngwaahịa Microsoft, nke a bu "onye nlekota ukwu"). Ka anyị gbanwee usoro mgbochi ndị metụtara mkpa maka mbuli elu nke ikike.
Hụkwa: Otu esi enweta ikike nchịkwa na Windows 7
Usoro 1: "Gaa dị ka onye nchịkwa"
N'ọnọdụ ụfọdụ, iji dozie nsogbu ahụ, ịkwesịrị ịme ngwa ahụ dịka onye nchịkwa. Ngwa ngwanrọ na mmeba .vbs, .cmd, .bat na-agba ọsọ na ikike ha.
Pịa aka nri na usoro a choro (na ihe atụ a, ọ bụ onye ntụgharị okwu nke iwu Windows 7).
Hụkwa: Oku akara oku na Windows 7
Mwepụta ga-eme na ikike ịhazi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụnye usoro ọ bụla mgbe mgbe, ị ga-aga na ihe onwunwe nke ụzọ mkpirisi nke ihe a ma mee usoro ndị a.
Site n'enyemaka nke RMB na ụzọ mkpirisi, anyị na-aga n'ime ya "Njirimara"
. Gaa na ntinye "Njikọ"ma lee igbe dị n'akụkụ akwụkwọ ahụ "Gbaa usoro a dịka onye nchịkwa" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Ugbu a, ngwa a ga-amalite na-akpaghị aka na ikike ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na njehie ahụ apụghị, wee gaa usoro nke abụọ.
Usoro 2: "Onye nchịkwa nchịkwa"
Usoro a bara uru maka onye meworo okenye, ebe usoro a na ọnọdụ a ga-adị nnọọ mfe. Onye ọrụ, na-agbanwe agbanwe ọ bụla, nwere ike imerụ kọmputa ya. Ya mere, ka anyi bido.
Usoro a anaghị adabara Windows 7 isi, ebe ọ bụ na ụdị nke ngwaahịa Microsoft ọ dịghị "ọrụ mpaghara" ihe na njikwa kọntaktị kọmputa.
Gaa na menu "Malite". Push PCM site na ihe "Kọmputa" ma gaa "Management".
N'akụkụ aka ekpe nke njikwa "Nchịkwa Kọmputa" gaa na ngalaba "Ndị ọrụ mpaghara" ma mepee ihe ahụ "Ndị ọrụ". Pịa bọtịnụ òké aka (PCM) na label "Nchịkwa". Na nchịkọta nhọrọ, kọwaa ma ọ bụ gbanwee (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) paswọọdụ. Gaa na isi "Njirimara".
Na windo nke mepee, tuo igbe dị n'akụkụ akwụkwọ ahụ "Gbanyụọ akaụntụ".
Omume a ga-eme ka akaụntụ ahụ rụọ ọrụ na ikike kachasị elu. Ị nwere ike tinye ya mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ma ọ bụ site na ịpịpụ, na-agbanwe onye ọrụ ahụ.
Usoro nke 3: Lelee maka nje
N'ọnọdụ ụfọdụ, njehie nwere ike ịme site na omume nke nje na usoro gị. Iji dozie nsogbu ahụ, ịkwesịrị iṅomi Windows 7 site na usoro antivirus. A ndepụta nke ọma free antiviruses: AVG Antivirus Free, Avast-free-antivirus, Avira, McAfee, Kaspersky-free.
Lee kwa: Lelee kọmputa gị maka nje
N'ọtụtụ ọnọdụ, nsonye nke usoro ihe omume dịka onye nchịkwa na-enyere aka wepu njehie ahụ. Ọ bụrụ na mkpebi ahụ ga-ekwe omume naanị site na ịmepụta akaụntụ na ikike kachasị elu ("Onye nchịkwa Super"), cheta na nke a na-ebelata nchekwa nke sistemụ arụmọrụ.